၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (4 of 5) – Dhamma Training Center
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (4 of 5)
၁၀- ပုရေဇာတပစ္စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (4 of 5) zawgyi
ဆဲလ် Cell ဟူသော ကလပ်စည်း
(ဃ-၁) ယနေ့သိပ္ပံပညာ၏ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွင် သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်ပင် အလွန့် အလွန်သေးငယ်သည့် အဏုမြူဓာတ်မှုန်များဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။
(ဃ-၂) ထိုအဏုမြူဓာတ်မှုန်လေးတစ်ခုကို အက်တမ် Atom ဟု အမည်ပေးထားပါသည်။ ထိုအက်တမ်ကို ထပ်မံ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောအခါ ပရိုတွန် Proton နျူထရွန် Neutron နှင့် အီလက်ထရွန် Electronတို့ ပါဝင် နေကြောင်း တွေ့ရှိကြပါသည်။
(ဃ-၃) လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် ထိုအက်တမ် Atom တစ်ခုထက် ပိုပြီး ပေါင်းစပ်ကြီးထွားလာပါက မော်လီကျူး Molecule ဟုခေါ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူတိုင်းသိကြသည့် ရေ H2O ကို မော်လီကျူး Molecule ဟုခေါ် သည်။ ထိုမော်လီကျူး Molecule များ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းလာသောအခါ ဆဲလ် Cell ဟူသော် ကလပ် စည်းများ ဖြစ်လာပါသည်။ လူ၏န္ဓာကိုယ်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် Cell ဟုခေါ်သော ကလပ်စည်းပေါင်း 30 Trillions ခန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ (1 Trillion =1 000,000,000,000။ ၁-နောက်က သုည ၁၂-လုံးရှိသည့် သင်္ချာကို ၁-ထရီလီယန် ခေါ်ပါသည်။)
(ဃ-၄) လူတစ်ယောက်၌ ၁-စက္ကန့်လျှင် Cell ဟူခေါ်သော ကလပ်စည်းပေါင်3း000,000,000 သုံးဘီလီယန် သေကြေ ပျက်စီးနေပါသည်။ အသစ်အသစ်ဖြစ်ပြီး ဖြည့်ပြီးဖြစ်နေသည်ကလည်း အရေအတွက် တူညီ နေပါသည်။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ ကလပ်စည်းများ သေကြေပျက်စီးသည့်နှုန်းက များပြီး ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် အသစ်ဖြစ်သည့် ကလာပ်စည်းက နည်းပါးလာလေသည်။ (Cells are constantly dying and new ones are being made simultaneously.) ဟု သိပ္ပံက ဆိုလေသည်။
(ဃ-၄) မိမိတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဖြစ်နေသည့် ထိုထိုအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ပကတိမျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ပါ သော်လည်း အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသည်နှင့်အမျှ အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပမှု နည်းပါးလာ ပါသည်။ အရေပြားများ တောင့်တင်းမှုမရှိဘဲ လျှော့ရဲကာ တွဲကျလာသည်ကိုမူ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ကလပ်စည်းတစ်ခုသည် သူ၏တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးလျှင် ပျက်သွားပါသည်
(င-၁) သိပ္ပံပညာ၏ တွေ့ရှိချက်တွင် Cell ဟုခေါ်သော ကလပ်စည်းတစ်ခုခြင်းစီ၊ တစ်ခုခြင်းစီသည် အငြိမ်မနေဘဲ လှုပ်လှုပ်ရွရွ၊ လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ပြီး လှုပ်ရှားနေကြောင်းနှင့် အသေအချာ လေ့လာကြည့်သောအခါတွင် ကလပ်စည်း တစ်ခုခြင်းသည် သူတို့၏တာဝန် ပြီးဆုံးသည်နှင့် ပျက်၍ ပျက်၍ ပျက်၍သွားနေသည့် အစဉ် အတန်းကြီးကို ပညာရှင်များက တွေ့ရှိလာကြပါသည်။ သို့သော် လူပုဂ္ဂိုလ်က ဤဖြစ်စဉ်ကို မည်သို့မှ ခံစားမှု မရှိနိုင်သကဲ့သို့၊ ပကတိမျက်စိနှင့်လည်း မမြင်ကြရပေ။
(င-၂) Cell ဟုခေါ်သော ကလပ်စည်းတစ်ခု ပျက်စီးနေသည့်နှုန်း (သို့မဟုတ်) ဆဲလ်တစ်ခု အသက်ရှင်နိုင်သည့် သက်တမ်းမှာ Nano one secondသာ ရှိလေသည်။ Nano one second ဟူသည် ၁-စက္ကန့်၏ သန်းတစ်ထောင်ပုံ တစ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
တစ်နည်းပြောရလျှင် ၁-စက္ကန့်ကို ၁ ၀၀၀ယ၀၀၀ယ၀၀၀ သန်းတစ်ထောင်နှင့်စား၍ ရသည့်အချိန်တို့ကို Nano one second ဟုခေါ်ပါသည်။ အမေ့ဗိုက်ထဲတွင် သန္ဓေတည်သည့် အချိန်ကစ၍ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်အတိုင်း ဖြစ်၍၊ ပျက်၍နေပါသည်။
(င-၃) ရုပ်ကလာပ်တစ်ခု၏ အသက်သည် စိတ်၏အသက် ခဏငယ် (၁၇ x ၃ = ၅၁) ချက်နှင့် ညီမျှ၏။ ရုပ်၏ ဥပါဒ် ခဏနှင့် ဘင်ခဏသည် ခဏေငယ်တစ်ချက်စီသာ ကြာပါသည်။ ရုပ်၏ဌီခဏမှာမူ ခဏငယ် ၄၉-ချက် ကြာပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်ဖျစ် ၁-တွက်၊ မျက်စိတစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပျက် ကာလတိုအတွင်း၌ ရုပ်ကလာပ် ပေါင်း ကုဋေပေါင်း ၅၈၀၀-ကျော် ပေါ်ပြီးပျောက် ဖြစ်ပြီး ပျက်နေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရုပ်ကလာပ်တစ်ခု၏ အသက်သည် ၁-စက္ကန့်ထက်ပင် တိုတောင်းသော လက်ဖျစ် ၁-တွက်၊ မျက်စိတစ်မှိတ်၊ လျှပ်တစ်ပျက်အချိန်၏ ကုဋေ ၅၈၀၀-ပုံ တစ်ပုံခန့်သာ ရှိလေသည်။
စက္ခုပသာဒ မျက်စိရုပ်ကလည်း ပရမတ်
(စ-၁) ရူပါရုံအဆင်းကလည်း ပရမတ် ဖြစ်ပါသည်။ မြင်သိစိတ်ကလည်း ပရမတ် ဖြစ်ပါသည်။ ရူပါရုံနှင့် စက္ခုပသာဒတို့သည် ပင်ကိုယ်သဘောအားဖြင့် ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေပေသည်။ သူလိုကိုယ်လို သာမာန်လူသား တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဤသို့ခိုင်မြဲမှုမရှိ၊ အနှစ်သာရမရှိသော ဓမ္မသဘာဝတရား သက်သက်ကို ဓမ္မသဘာဝ သက်သက်အဖြစ် သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ကာ လက်ခံရန် လွန်စွာပင် ခက်ခဲရှိပါသည်။
(စ-၂) ထို့ကြောင့်ပင် ရူပါရုံနှင့် စက္ခုပသာဒတို့ တိုက်ဆုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မြင်ခြင်းပေါ်မူတည်ပြီး လည်းကောင်း၊ ကြားခြင်း၊ နံခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်း စသည်ပေါ်မူတည်ပြီး ဖြူနီဝါပြာအရောင်အသွေး အဆင်း သဏ္ဍာန် Form ၊ အ၀ိုင်းလေးတောင့် အရွယ်အစားပမာဏ Dimension ၊ အလေးချိန်ွှWeight ၊ ဒြပ်သဘော Mass ဟူ၍ ပညတ်ဝေါဟာရ တင်ကြပါသည်။
(ဇ-၁) တစ်ဖက်တွင်လည်း စက္ခုပသာဒ သက်သက်ဖြစ်သော ဓမ္မသဘာဝကို မသိနိုင်သဖြင့် “ငါ့မျက်စိ ကြည့် ကောင်းတယ်၊ ငါ့မျက်စိလှတယ်၊ ငါ့မျက်စိ အမြင်အားမကျသေးဘူး”ဟု မာန၊ အတ္တ ဖြစ်ကြတော့သည်။ ပရမတ္ထတရား၏ အထင်အရှားမရှိသည့်သဘာဝကို အမှန်အတိုင်း သိရှိနားလည် သဘောပေါက်ရန် ခက်ခဲသဖြင့် မိမိတို့ နားလည်သကဲ့သို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ဇ-၂) မျက်စိသည်ဟူသော စက္ခုပသာဒရုပ်တရားသည် အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အကျိုးတရားမျှသာဟု မသိနိုင်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး သံသရာကြောမှာ ရှည်ကြာသရွေ့ မျောပါကာ “ငါ့မျက်စိကောင်းအောင် ဘုရားသခင်က စောင့်ရှောက်ပေးထားလို့ ကောင်းနေတာ” ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ “နတ်တွေ စောင့်ရှောက် ပေးထားလို့ ကောင်းနေတာ”ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ “ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး၊ သူ့အလိုလို ငါ့မျက်စိတွေ ကောင်းနေတာ”ဟူ၍ လည်းကောင်း ယူနေကြပါသည်။ ဉာဏ်နည်းလွန်းသောကြောင့် မူလသဘာဝ အကြောင်းတရားက ပျောက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
(ဇ-၃) အမှန်တကယ်တွင်မူ လူဟုသမုတ်ထားသော်လည်း ရုပ်အမှုန်များစွာဖြင့် ရုပ်ကိုတည်ဆောက်ထား ပါသည်။ ၎င်းရုပ်မှုန်များလည်း ပေါ်ပြီးပျောက်နေသည့် သဘောတရားမျှသာဖြစ်သည်။ နာမ်တရား အပိုင်းတွင်လည်း အလွန့်အလွန် တိုတောင်းသည့်ကာလတိုအတွင်း ပေါ်ပြီးပျောက် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ချုပ်နေသည့် သဘောတရားမျှသာ ရှိလေသည်။
၁၀- ပုရဇောတပစ်စယော Purejāta Paccayo (Prenascence condition) (4 of 5) pyidaungsu – unicode
ဆဲလျ Cell ဟူသော ကလပျစညျး
(ဃ-၁) ယနသေိ့ပ်ပံပညာ၏ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှငျ သာမနျမကျြစိဖွငျ့ မမွငျမတှနေို့ငျလောကျအောငျပငျ အလှနျ့ အလှနျသေးငယျသညျ့ အဏုမွူဓာတျမှုနျမြားဖွငျ့ လူ့ခန်ဓာကိုယျကို ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျထားကွောငျး ဖျောပွပါသညျ။
(ဃ-၂) ထိုအဏုမွူဓာတျမှုနျလေးတဈခုကို အကျတမျ Atom ဟု အမညျပေးထားပါသညျ။ ထိုအကျတမျကို ထပျမံ၍ ခှဲခွမျးစိတျဖွာသောအခါ ပရိုတှနျ Proton နြူထရှနျ Neutron နှငျ့ အီလကျထရှနျ Electronတို့ ပါဝငျ နကွေောငျး တှရှေိ့ကွပါသညျ။
(ဃ-၃) လူ့ခန်ဓာကိုယျတှငျ ထိုအကျတမျ Atom တဈခုထကျ ပိုပွီး ပေါငျးစပျကွီးထှားလာပါက မျောလီကြူး Molecule ဟုချေါသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ လူတိုငျးသိကွသညျ့ ရေ H2O ကို မျောလီကြူး Molecule ဟုချေါ သညျ။ ထိုမျောလီကြူး Molecule မြား စနဈတကြ ဖှဲ့စညျးလာသောအခါ ဆဲလျ Cell ဟူသျော ကလပျ စညျးမြား ဖွဈလာပါသညျ။ လူ၏န်ဓာကိုယျကို ယဘေူယအြားဖွငျ့ Cell ဟုချေါသော ကလပျစညျးပေါငျး 30 Trillions ခနျ့ဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားပါသညျ။ (1 Trillion =1 000,000,000,000။ ၁-နောကျက သုည ၁၂-လုံးရှိသညျ့ သင်ျခြာကို ၁-ထရီလီယနျ ချေါပါသညျ။)
(ဃ-၄) လူတဈယောကျ၌ ၁-စက်ကနျ့လြှငျ Cell ဟူချေါသော ကလပျစညျးပေါငျ3း000,000,000 သုံးဘီလီယနျ သကွေေ ပကျြစီးနပေါသညျ။ အသဈအသဈဖွဈပွီး ဖွညျ့ပွီးဖွဈနသေညျကလညျး အရအေတှကျ တူညီ နပေါသညျ။ အသကျအရှယျ ကွီးရငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ ကလပျစညျးမြား သကွေပေကျြစီးသညျ့နှုနျးက မြားပွီး ပွနျလညျဖွညျ့တငျးရနျ အသဈဖွဈသညျ့ ကလာပျစညျးက နညျးပါးလာလသေညျ။ (Cells are constantly dying and new ones are being made simultaneously.) ဟု သိပ်ပံက ဆိုလသေညျ။
(ဃ-၄) မိမိတို့၏ ခန်ဓာကိုယျတှငျဖွဈနသေညျ့ ထိုထိုအခွအေနအေရပျရပျကို ပကတိမကျြစိဖွငျ့ မမွငျနိုငျပါ သျောလညျး အသကျအရှယျ ကွီးရငျ့လာသညျနှငျ့အမြှ အသားအရေ ကွညျလငျတောကျပမှု နညျးပါးလာ ပါသညျ။ အရပွေားမြား တောငျ့တငျးမှုမရှိဘဲ လြှော့ရဲကာ တှဲကလြာသညျကိုမူ တှမွေ့ငျနိုငျပါသညျ။
ကလပျစညျးတဈခုသညျ သူ၏တာဝနျထမျးဆောငျပွီးလြှငျ ပကျြသှားပါသညျ
(င-၁) သိပ်ပံပညာ၏ တှရှေိ့ခကျြတှငျ Cell ဟုချေါသော ကလပျစညျးတဈခုခွငျးစီ၊ တဈခုခွငျးစီသညျ အငွိမျမနဘေဲ လှုပျလှုပျရှရှ၊ လှုပျလှုပျရှရှဖွဈပွီး လှုပျရှားနကွေောငျးနှငျ့ အသအေခြာ လလေ့ာကွညျ့သောအခါတှငျ ကလပျစညျး တဈခုခွငျးသညျ သူတို့၏တာဝနျ ပွီးဆုံးသညျနှငျ့ ပကျြ၍ ပကျြ၍ ပကျြ၍သှားနသေညျ့ အစဉျ အတနျးကွီးကို ပညာရှငျမြားက တှရှေိ့လာကွပါသညျ။ သို့သျော လူပုဂ်ဂိုလျက ဤဖွဈစဉျကို မညျသို့မှ ခံစားမှု မရှိနိုငျသကဲ့သို့၊ ပကတိမကျြစိနှငျ့လညျး မမွငျကွရပေ။
(င-၂) Cell ဟုချေါသော ကလပျစညျးတဈခု ပကျြစီးနသေညျ့နှုနျး (သို့မဟုတျ) ဆဲလျတဈခု အသကျရှငျနိုငျသညျ့ သကျတမျးမှာ Nano one secondသာ ရှိလသေညျ။ Nano one second ဟူသညျ ၁-စက်ကနျ့၏ သနျးတဈထောငျပုံ တဈပုံဖွဈပါသညျ။
တဈနညျးပွောရလြှငျ ၁-စက်ကနျ့ကို ၁ ၀၀၀ယ၀၀၀ယ၀၀၀ သနျးတဈထောငျနှငျ့စား၍ ရသညျ့အခြိနျတို့ကို Nano one second ဟုချေါပါသညျ။ အမဗေို့ကျထဲတှငျ သန်ဓတေညျသညျ့ အခြိနျကစ၍ အဆိုပါ ဖွဈစဉျအတိုငျး ဖွဈ၍၊ ပကျြ၍နပေါသညျ။
(င-၃) ရုပျကလာပျတဈခု၏ အသကျသညျ စိတျ၏အသကျ ခဏငယျ (၁၇ x ၃ = ၅၁) ခကျြနှငျ့ ညီမြှ၏။ ရုပျ၏ ဥပါဒျ ခဏနှငျ့ ဘငျခဏသညျ ခဏငေယျတဈခကျြစီသာ ကွာပါသညျ။ ရုပျ၏ဌီခဏမှာမူ ခဏငယျ ၄၉-ခကျြ ကွာပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လကျဖဈြ ၁-တှကျ၊ မကျြစိတဈမှိတျ၊ လြှပျတဈပကျြ ကာလတိုအတှငျး၌ ရုပျကလာပျ ပေါငျး ကုဋပေေါငျး ၅၈၀၀-ကြျော ပျေါပွီးပြောကျ ဖွဈပွီး ပကျြနကွေပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ရုပျကလာပျတဈခု၏ အသကျသညျ ၁-စက်ကနျ့ထကျပငျ တိုတောငျးသော လကျဖဈြ ၁-တှကျ၊ မကျြစိတဈမှိတျ၊ လြှပျတဈပကျြအခြိနျ၏ ကုဋေ ၅၈၀၀-ပုံ တဈပုံခနျ့သာ ရှိလသေညျ။
(စ-၁) ရူပါရုံအဆငျးကလညျး ပရမတျ ဖွဈပါသညျ။ မွငျသိစိတျကလညျး ပရမတျ ဖွဈပါသညျ။ ရူပါရုံနှငျ့ စက်ခုပသာဒတို့သညျ ပငျကိုယျသဘောအားဖွငျ့ ဖောကျပွနျပွောငျးလဲနပေသေညျ။ သူလိုကိုယျလို သာမာနျလူသား တဈယောကျအနဖွေငျ့ ဤသို့ခိုငျမွဲမှုမရှိ၊ အနှဈသာရမရှိသော ဓမ်မသဘာဝတရား သကျသကျကို ဓမ်မသဘာဝ သကျသကျအဖွဈ သိရှိနားလညျသဘောပေါကျကာ လကျခံရနျ လှနျစှာပငျ ခကျခဲရှိပါသညျ။
(စ-၂) ထို့ကွောငျ့ပငျ ရူပါရုံနှငျ့ စက်ခုပသာဒတို့ တိုကျဆုံမှုကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသညျ့ မွငျခွငျးပျေါမူတညျပွီး လညျးကောငျး၊ ကွားခွငျး၊ နံခွငျး၊ ထိတှခွေ့ငျး စသညျပျေါမူတညျပွီး ဖွူနီဝါပွာအရောငျအသှေး အဆငျး သဏ်ဍာနျ Form ၊ အဝိုငျးလေးတောငျ့ အရှယျအစားပမာဏ Dimension ၊ အလေးခြိနျှ Weight ၊ ဒွပျသဘော Mass ဟူ၍ ပညတျဝေါဟာရ တငျကွပါသညျ။
(ဇ-၁) တဈဖကျတှငျလညျး စက်ခုပသာဒ သကျသကျဖွဈသော ဓမ်မသဘာဝကို မသိနိုငျသဖွငျ့ “ငါ့မကျြစိ ကွညျ့ ကောငျးတယျ၊ ငါ့မကျြစိလှတယျ၊ ငါ့မကျြစိ အမွငျအားမကသြေးဘူး”ဟု မာန၊ အတ်တ ဖွဈကွတော့သညျ။ ပရမတ်ထတရား၏ အထငျအရှားမရှိသညျ့သဘာဝကို အမှနျအတိုငျး သိရှိနားလညျ သဘောပေါကျရနျ ခကျခဲသဖွငျ့ မိမိတို့ နားလညျသကဲ့သို့ ပွောငျးလဲချေါဝျေါကွခွငျး ဖွဈပါသညျ။
(ဇ-၂) မကျြစိသညျဟူသော စက်ခုပသာဒရုပျတရားသညျ အကွောငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသညျ့ အကြိုးတရားမြှသာဟု မသိနိုငျသေးသမြှ ကာလပတျလုံး သံသရာကွောမှာ ရှညျကွာသရှေ့ မြောပါကာ “ငါ့မကျြစိကောငျးအောငျ ဘုရားသခငျက စောငျ့ရှောကျပေးထားလို့ ကောငျးနတော” ဟူ၍ လညျးကောငျး၊ “နတျတှေ စောငျ့ရှောကျ ပေးထားလို့ ကောငျးနတော”ဟူ၍ လညျးကောငျး၊ “ဘာအကွောငျးကွောငျ့မှ မဟုတျဘူး၊ သူ့အလိုလို ငါ့မကျြစိတှေ ကောငျးနတော”ဟူ၍ လညျးကောငျး ယူနကွေပါသညျ။ ဉာဏျနညျးလှနျးသောကွောငျ့ မူလသဘာဝ အကွောငျးတရားက ပြောကျနခွေငျး ဖွဈပါသညျ။
(ဇ-၃) အမှနျတကယျတှငျမူ လူဟုသမုတျထားသျောလညျး ရုပျအမှုနျမြားစှာဖွငျ့ ရုပျကိုတညျဆောကျထား ပါသညျ။ ၎င်းငျးရုပျမှုနျမြားလညျး ပျေါပွီးပြောကျနသေညျ့ သဘောတရားမြှသာဖွဈသညျ။ နာမျတရား အပိုငျးတှငျလညျး အလှနျ့အလှနျ တိုတောငျးသညျ့ကာလတိုအတှငျး ပျေါပွီးပြောကျ ဖွဈပျေါလာပွီး ခြုပျနသေညျ့ သဘောတရားမြှသာ ရှိလသေညျ။